Ra’iisul Wasaaraha “Xukuumadda Waxay Abuuri Doontaa Mashruucyo Lagu Horumarinayo Beeraha” – Goobjoog News
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay sameyn doonto mashruuxyo la doonayo in lagu horumariyo beeraha.
Waxa uu sheegay Ra’iisul wasaaraha in sidoo kale xukuumaddiisa ay sameyn doonto biyo xireenno si looga faa’ideysto xilliga jiilaalka.
“Si looga tabaabusheysto inay soo laabtaan abaaraha, xukuumadu waxay abuuri doontaa mashruucyo lagu horumarinayo beeraha iyo wax soo saarka, sidoo kalena waxay sameyn doontaa biyo xireeno, si looga faa’iideysto xilliga jiilaalka” ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Kheyre.
Dhanka kale Ra’iisul wasaare Kheyre oo ka hadlay dhanka gurmadka abaaraha ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ay muujiyeen isku tashi, isagoo tilmaamay in gurmadkani uu ka turjumayo soo noqoshada kalsoonidii ay isku qabeen bulshada Soomaaliyeed.
Dalka waxaa ka jirta abaar baahsan oo saameysay dadka iyo duunyada, waxaa guray Labadii webi ee dalka marayay, iyadoo taasi ay xaaladda kasii darsiisay.
Gudoomiyahii Maxkamadda Sare Ee Galmudug Oo Is Casilay
Nzuqen ygsyls cialis over the counter 2020 is there a generic for cialis
Xfksap ihyukt Brand viagra buy real cialis online
Szgdug hvkxdl Sale viagra canadian pharmacy cialis 20mg
Wmcdpy lllczy online canadian pharmacy best online pharmacy
Hjrlmz rldnku canadian online pharmacy Jwtzj
cialis with dapoxetine 80mg viagra cialis discount cialis [u...
united pharmacy cialis cialis 25mg canada generic cialis in...
free viagra and cialis samples prescription drugs canada cia...
cheap viagra online viagra montreal viagra paypal bezahlen [...
800 mg cialis cialis 200 mg price 36 hour cialis online [url...